Safari Technology Preview kinova 138 Navoaka | Avy amin'ny mac aho
Ny dikan-teny iray hafa amin'ny navigateur andrana an'i Apple dia tonga any amin'ireo mpampiasa izay nametraka izany tao amin'ny Mac-ny. Ny kinova vaovao navoaka dia 138 ary, toy ny amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, dia manitsy ny lesoka sasany ary manampy ny fanatsarana fiarovana mahazatra izay matetika ataon'izy ireo. Ity kinova vaovao amin'ny navigateur ity dia tonga iray volana taorian'ny famoahana ny version 137, Apple tamin'ity indray mitoraka ity dia nanitatra ny famoahana ny dikan-teny noho ny fetin'ny Krismasy.
Safari Technology 138 dia mifototra amin'ny fanavaozana Safari 15 vaovao tafiditra ao amin'ny macOS Monterey beta farany, noho izany dia ampidirina ao ny sasany amin'ireo fiasa ao aminy toy ny bara fisolo notsorina vaovao miaraka amin'ny fanohanan'ny vondrona tab sy ny fanatsarana ny fanohanana ny fanitarana tranonkala Safari.
Ity fanavaozana vaovao ity dia azo alaina ao amin'ilay faritra Fanavaozana ny lozisialy ao anatin'ny System Preferences, raha mbola nisintona kinova teo aloha tamin'ity fanandramana andrana ity ianao. Raha te hampiasa ity browser ity dia tsy ilaina ny manana kaonty mpamorona ary miasa misaraka sy tsy miankina amin'ny kinova Safari napetraka ao amin'ny solosaina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » Nalefa ny kinova 138 an'ny Safari Technology Preview
WhatsApp for Mac dia ahafahanao miato sy manohy ny firaketana feo